» १० कम्पनीमा किन झुम्मिए लगानीकर्ता ? यी हुन सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी
१० कम्पनीमा किन झुम्मिए लगानीकर्ता ? यी हुन सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १५:२०
काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ताहरु झुम्मिएका छन् । सो कम्पनीको आज पनि एक अर्ब भन्दा बढिको कारोबार भएको छ । केही दिनदेखि कुनै पनि कारण बिना नै मूल्यबृद्धि भइरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आज एक अर्ब छ करोड ६४ लाख ६४ हजार ७२१ रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । यो साताको तीनदिनदेखि नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताहरुको भिड लागेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रसुवा गढी हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ताहरु झुम्मिएका छन् । कम्पनीको आज ४७ करोड ८२ लाख ९२ हजार १०७ रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
लगानीकर्ता झुम्मिएको अर्को कम्पनी हो, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी । सो कम्पनीको ३७ करोड रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ । दुई हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यबृद्धि हुनाको कारण हकप्रद शेयर भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै केहीदिनदेखि सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीहरुको सूचिमा पर्न सफल लुम्बिनी विकास बैंकको ३५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने निफ्राको ३३ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंक र एनसीसी बैंकको समान २९ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र कुमारी बैंकको समान २८ करोड रुपैयाँको दरले कारोबार भएको छ । आजको सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीहरुको सूचिमा हकप्रद निष्काशन गर्ने तयारी गरेको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी पनि परेको छ ।
नेपाल पेमेन्ट सेलुसन र आई पे रेमिटबीच डिजटल रेमिट कारोबार सम्बन्धी सम्झौता
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुन :कमल गौतम नियुक्त, थपियो चार बर्षको अवधि
नर्डिक देशहरुमा फैलिँदै जेनिस सोलुसन
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तद्वारा बाढीपिडित र कोरोना प्रभावित सदस्यलाई आर्थिक सहयोग
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बीमा–बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको घोषणा
२ हजार ४ सय ७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
तीन हजार प्राविधिकले भोलि सिंहदरबार घेराऊ गर्ने
सिटिजन लाइफको व्यतित बीमालेखमा शतप्रतिशत छुट
माथिल्लो तामाकोशीमो शेयरमा सर्किट, आजका कमाउने र गुमाउने कम्पनी कुन कुन ?
नेप्से लगातार घट्दै, कारोबार ७ अर्बमा सिमित
यी हुन आज सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कारोबार झनै घट्यो
१९ जीवन बीमा कम्पनीको लगानी साढे तीन खर्ब, अधिकांश लगानी मुद्दति निक्षेपमा